तपाईंको मण्डली दर्ता गर्न तल फारम भर्नुहोस्। दर्ताले प्रति वर्ष $ 29.00 शुल्कको आवश्यक पर्दछ। एकपटक तपाईंको दर्ता स्वीकृत भएपछि, तपाइँ आफ्नो खातामा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको प्रोफाईल अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद!
के तपाइँ थप जानकारी प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ? हो होइन
नियम र सुरक्षा
नियम र स्थितिहरु यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
दर्ताको लागि $ 29.00 शुल्क वार्षिक भुक्तानी आवश्यक पर्दछ। एक पटक शुल्क भुक्तानी भएपछि, तपाईंको दर्ता प्रशासक द्वारा पूर्वावलोकन र सक्रिय गरिनेछ। तपाईंको खाता सक्रिय हुँदा तपाईले एक इमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ।
म शर्तहरू र सर्तहरू स्वीकार गर्दछु*
तपाईलाई मानव हो प्रमाणित गर्नुहोस्
तपाईं दर्ता पूरा गर्न र आफ्नो खाता सक्रिय छ, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस् तपाइँको भुक्तान गर्न।
तपाईंको डाटा पेश गर्न कृपया जाभास्क्रिप्ट खोल्नुहोस्। धन्यवाद!